‘१० हजारमा लाइसेन्स बन्ने जमाना गए हजुर’ – Nepal Japan
नेपाली समय : 12:53:13
जापानी समय : 04:08:13
20 August, 2019 11:50 | पत्रपत्रिका | comments | 32400 Views
कारकाँदोस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सोमबार बिहान १० बजे पुग्दा गेटमा रातो कुर्था र कालो सुरुवाल लगाएकी अधबैंसे महिलाले मुस्कानसहित प्रश्न गरिन्, ‘के कामले आउनुभएको हो ? म गरिदिन्छु नि !’ सुरुमा ग्राहकका रूपमा प्रस्तुत हुन गाह्रो भयो। संवाददाताले स्कुटर नवीकरण गर्न आएको हुँ भनेपछि उनले एक जना पुरुषलाई डाकिन्।
‘४३ सय रुपैयाँ राजस्व पर्छ। सेवाशुल्क तीन सय रुपैयाँ मात्र। सबैभन्दा सस्तो’, उनले फकाउन खोजिन्, ‘हजुर आफैंले गर्दा धेरै समय लाग्छ। हेर्नुस् त बैंकमा कत्रो लाइन छ। राजस्व शाखामा त्यो भन्दा लामो छ। हजुर १२ बजे लिन आउँदा तयार हुन्छ।’ १० बजेर ११ मिनेट जाँदासम्म कार्यालयमा काम सुरु भइसकेको थिएन। कार्यालयकोे पूर्वउत्तरतिरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा, पश्चिम-उत्तरमा राजस्व शाखा र फोटो खिचाउन सेवाग्राही लाइनबद्ध भइसकेका थिए। लाइनमा सेवाग्राहीभन्दा बढी बिचौलिया थिए।
डुडुवा-५ कम्दीका वसन्त यादवलदे भने, ‘बाइक बेचें। पास गर्न आएको छु। साथी बिचौलिया छ। सबै काम उसैले गर्छ।’ ट्याक्टर बेच्न आएका बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका-जमुनीका आइतबारी खटिक दक्षिणतिरको चियापसलमा ढुक्कसँग बसेका थिए। ‘मैले के गर्नु छ। सबै उसैले (बिचौलिया) गर्छ। काम बनेपछि ल्याएर दिन्छु। कतै नजानु भनेको छ’, उनले भने, ‘काम बनेपछि पाँच सय/हजार दिऔंला।’
‘तपाईंलाई केही सेवा गर्न सक्छु ? ’, युवक बिचौलियाले जिज्ञासा राखे। उनी पैसा दिए लाइसेन्स बनाउन सकिनेमा ढुक्क थिए। ‘एकडेढ महिनाको समय दिनुस्। तपाइको काम पक्का।’
छेउछाउका होटल अरू ठाउँभन्दा महँगा छन्। संवाददाताले एक बोतल स्प्राइटको ४५ रुपैयाँ तिर्नुप-यो। जब कि अलि परको पसलमा ४० रुपैयाँ मात्र पर्छ। पाँच रुपैयाँ पर्ने चारवटा टिकट पसलेले तीस रुपैयाँमा लिए। संवाददाताले दुई वटा टिकट किन्न १५ रुपैयाँ दिँदा तीनवटा हाजमोला चकलेट थमाए। किन, ‘दस भएन ? ’, उनले जबाफ फर्काए, ‘दुई रुपैयाँ मेरो यातायात खर्च।’
कार्यालयमा पार्किङको समस्या छ। बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म यातायात कार्यालयअगाडि ट्राफिक जाम हुन्छ।
अपराह्न साढे चार बजेतिर कार्यालयका निमित्त प्रमुख पूर्ण खत्रीसँग जिज्ञासा राख्दा पार्किङ अभावमा सवारीसाधन पार्किङ पनि भद्रगोल भएको र दुर्घटनाको खतरा रहेको उनी आफंैले भने। उनले बिचौलियाले कार्यकक्षभित्र पसेको पनि स्वीकार गरे। ‘अहिलेसम्म उनीहरूबाट दुरुपयोग भएको छैन। कार्यालयलाई कुनै क्षति पनि भएको छैन।’
बिचौलियाले कर्मचारीलाई घुस दिने गरेको र परीक्षामा फेल भएका व्यक्तिले लाइसेन्स दिनै नसकिने उनले दाबी गरे, ‘सीसीटिभी जडान गरिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। पास भएको पास र फेल हुने फेल हुन्छ।’
कार्यालयबाट निस्कँदै गर्दा खत्रीको कार्यकक्षमा रहेका एक शाखा अधिकृतको फुर्तीफार्ती थियो, ‘यो अफिस अहिले पूरै युवाले चलाएका छन्। कुनै समस्या देख्नु हुन्न।’
एक लाख ९० हजार मापसेको कारबाहीमा चार सय ३९ चालकको लाइसेन्स निलम्बन